सुनचाँदी आयात तथा बिक्री सहज बनाइन दिन व्यवसायीको अनुरोध - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
काठमाडौँ / सुनचाँदी तथा आभूषण व्यवसायीले सहजरूपमा व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाइनदिन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका छन् ।
महासङ्घको तथ्याङ्कअनुसार देशका ७७ वटै जिल्लामा गरगहना व्यावसायिक फर्म सञ्चालनमा छन् । महासङ्घमा अहिले चार हजार व्यवसायी आबद्ध छन् ।
मुलुकभर गरगहना व्यवसायीको कूल सङ्ख्या २३ हजार हाराहारी रहेको छ । वाणिज्य बैंकमार्फत दैनिक २० केजी सुन बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । मागको ३० प्रतिशत मात्रै आपूर्ति हुने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
संस्थाका द्वितीय उपाध्यक्ष द्वारिका विश्वकर्माले दैनिक २० किलोको कोटा निर्धारण गरेको यो मागअनुसार धान्नै नसकिएको भन्दै सुन आयातको कोटा बढाउन आग्रह गरे ।
यो व्यवसायमा करिब छ लाख कालिगड छन् । भारतको कोलकाता र पश्चिम बङ्गालबाट कालिगड आउँछन् । यसमा नेपाली ४० र विदेशी ६० प्रतिशत छन् ।
सुनको भाउमा निरन्तर बृद्धि, आज पनि तोलामा एक हजार रुपैयाँ बढ्यो
सुनचाँदीको भाउ सामान्य बढ्यो, कति पुग्यो आज ?
सुनचाँदीको भाउमा आज पनि गिरावट, सुन तोलामा एक हजार घट्यो
सुनचाँदीको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? आज कति पुग्यो [ थाहा पाउनुस् ]
आज विहिबार सुनको मूल्यमा रु एक हजार ६०० वृद्धि
सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, यस्तो छ आजको मूल्य